Shikshalaya | ग्लोबलाइजेसनसँगै हिँड्नुको विकल्प छैन
ग्लोबलाइजेसनसँगै हिँड्नुको विकल्प छैन
By Admin May 03, 2020 465 0
इलाम जिल्लाको लक्ष्मीपुरमा जन्मेका डिके ढुंगानाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट एजुकेसन म्यानेजमेन्टमा पोस्टग्य्राजुएट डिप्लोमा गरेका छन् ।
ढुंगानाको परिवार पुस्तौँदेखि शिक्षामा समर्पित थियो । डिकेका हजुरबुबामा इलाममै सामुदायिक विद्यालय स्थापनामा सक्रिय थिए । झापाको प्रख्यात कन्काई स्कुल डिकेका बुबाले ०३६ सालमा स्थापना गरेका हुन् । आफ्नो इच्छा फरक भए पनि पारिवारिक कारणले डिके ०४७ देखि त्यसै कन्काई स्कुलसँग आबद्ध भए । पछि ०५६ मा १९ विद्यार्थी र ९ शिक्षक–कर्मचारीबाट रेडियन्ट रिडर्स एकेडेमी सुरु गरे । सबैको मिहिनेतको फलस्वरूप पछिल्लो समयमा रेडियन्टमा १२–१३ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने १ सय २५ शिक्षक–कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसो त डिकेकै नेतृत्वमा ०६७ बाट खुलेको कलेज अक्सब्रिजमा ६ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कक्षा ११–१२ देखि स्नातकोत्तरसम्म अध्यापन हुने अक्सब्रिज गुणस्तरीय कलेजमा गनिन्छ । स्कुल र कलेजको यो संलग्नतासँगै डिके निजी विद्यालयहरूको हकहित र अधिकार पैरवीमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय छन् । प्याब्सनका जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय उपाध्यक्षसम्मको भूमिका उनले सफलतापूर्वक निभाएका छन् भने लायन्स क्लब इन्टरनेसनलसँग आबद्ध रही गभर्नरको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनै डिके ढुंगानासँगको कुराकानीको मूल अंश :
अक्सब्रिज फाउन्डेसनमा किन आवद्ध हुनुभयो ?
उच्च शिक्षामा केही नयाँपन दिनुपर्छ भन्ने मनमा थियो । सर्टिफिकेटको साथमा गरिखाने शिक्षा दिने उद्देश्यका साथ अक्सब्रिजसँग आबद्ध भएँ । उच्च शिक्षा भनेको गरिखाने शिक्षा दिने क्षेत्र हो । विश्वभर सेलेबल बन्न सक्ने, स्किलसहितको शिक्षा दिनु अक्सब्रिजको उद्देश्य हो । वास्तवमा शिक्षा आफैँमा सफलताको साधन हो, लगानी हो । मैले मेरो जीवनको यात्रामा युरोप, अमेरिका र एसियाका गरी झन्डै ४० देशको भ्रमणका क्रममा शैक्षिक पद्धति प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने र अध्ययन गर्ने मौका पाएको छु । विद्यार्थीको मार्कसिटमा अंकले मात्र हुँदैन, अबको शिक्षा गरिखाने शिक्षा हुनैपर्छ । विद्यार्थी जुनसुकै डिग्री हासिल गरेर बाहिरिँदा काम पाउने क्षमतावान् बन्नैपर्छ । यस्तै, उद्देश्यका साथ अक्सिब्रिजको स्थापना भएको हो । यहाँ सबैखाले विद्यार्थीले पढ्न सक्छन् । पैसा नहुनेका लागि छात्रवृत्ति छ, पैसा हुनेले तिरेर पढ्न सक्छन् । क्षमतावान्लाई विशेष छात्रवृत्ति पनि छ । यसको अर्थ यहाँ सबैले पढ्न सक्छन् । हामीकहाँ डिसिप्लेन इन्चार्जको व्यवस्था छैन, तर काउन्सिलिङ इन्चार्जको व्यवस्था छ । हामी अनुशासनमा कडिकडाउ गर्छौं । हामीले हेर्ने भनेको सर्टिफिकेटसँगै विद्यार्थीले जीवनयापनको कला जान्यो कि जानेन भन्ने हो । यसका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
उत्पादित जनशक्ति बजारमा खपतका हिसाबले हेर्दा हामीले दिएको डिग्री र उनीहरूमा भएको कार्यक्षमताको तारतम्य छ कि छैन ? आज हाम्रा उत्पादनले चाहे न्यु दिल्लीमा होस्, चाहे टोकियोमा, चाहे एल एन्जल्समा होस्, चाहे सिड्नी नै किन नहोस्, विश्वका सबै कुनामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् कि सक्दैन ? सक्छन् भने त्यही हो गुणस्तरीयता ।
नेपालको शैक्षिक ट्रेन्ड कस्तो छ ?
नेपाल विश्वको समकालीन शिक्षा पछ्याउनेक्रममा छ । राज्यले कही गर्न नसके पनि निजी क्षेत्रले केही प्रयास गरेको छ । चाहेर वा नचाहेर शिक्षा डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । अब हाम्रा क्लासरुम डिजिटल हुन्छन् । सूचना–प्रविधिसँग भिजेर काम गर्नुपर्ने भइसक्यो । विश्वव्यापीकरणकै सारमा हिँड्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । अब स्किल बेस र निड बेसका जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्ने हो, तर यसमा हामीले थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ । यसमा नेपालको प्रयत्न छ तर पूरा छैन । जस्तै, शिक्षा क्याम्पस धेरै छन्, तर शिक्षक राख्ने ठाउँ छैनन् । कमर्सको म्यानपावर बिक्दैनन्, तर सबैभन्दा बढीले व्यवस्थापन विषय पढ्छन् । यसको अर्थ हामी सर्टिफिकेटधारी मात्र उत्पादन गर्छौं । नेपालका सबैखाले शैक्षिक संस्थाले सर्टिफिकेट उत्पादन गर्छौं । उत्पादनलाई एडजस्ट गर्ने प्रयास गरे पनि सबैले अवसर पाउने अवस्था छैन । पछिल्ला केही वर्षमा सरकारी तथा गैरसरकारी पक्षले केही प्रयास भने गरेका छन्, तर यसले पूर्णता पाएको छैन । सरकारले उत्पादित जनशक्ति खपत गर्ने ठाउँ सिर्जना गर्नुपर्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि के–के कुरा आवश्यक छन् ?
गुणस्तरको आफैँमा कुनै खास इन्डिकेटर छैन । उत्पादित जनशक्ति बजारमा खपतका हिसाबले हेर्दा हामीले दिएको डिग्री र उनीहरूमा भएको कार्यक्षमताको तारतम्य छ कि छैन ? आज हाम्रा उत्पादनले चाहे न्यु दिल्लीमा होस्, चाहे टोकियोमा, चाहे एल एन्जल्समा होस्, चाहे सिड्नी नै किन नहोस्, विश्वका सबै कुनामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् कि सक्दैन ? सक्छन् भने त्यही हो गुणस्तरीयता । विश्व बजारमा फिट हुन सक्छ भने त्यसले गुणस्तर देखाउँछ । गुणस्तरको पहिलो कसी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नै हो । उत्पादित जनशक्तिमा क्षमता, अध्ययन गरेको विषयमा पूर्ण ज्ञान र सिर्जनशीलता भयो भन्ने गुणस्तरीय शिक्षा भएको मान्न सकिन्छ ।
विश्वको तुलनामा नेपालको शिक्षाका राम्रा पक्ष के छन् ?
कन्टेन्टको हिसाबले नेपालको शिक्षा धेरै माथि छ । विश्वका सबै शैक्षिक संस्थामा यहाँका विद्यार्थीले उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्छन् । साउथ एसियामा नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंकाको कन्टेट माथि छ । तर, टेक्निकल्ली नेपाल पछि छ । हामीले स्विमिङका विषयमा सिकायौँ, तर पोखरीमा पठाएनौँ । कारको फिचर पढायौँ, तर कार नदेखेको ठाउँ पनि छ । अब परीक्षामा त लेख्नैप¥यो । त्यो पढाइ कोरा भयो । यसलाई व्यावहारिक बनाउने हो भने हामी माथि छौँ । हाम्रो ज्ञान व्यवहारमा चाहियो । यदि व्यावहारिकता जोड्यो भने हाम्रो शिक्षा उत्कृष्ट हुन्छ । तर, यसो गर्न हाम्रा विश्वविद्यालयले सकेका छैनन् ।
रेडियन्ट स्कुलमा जाँदा अन्य विद्यालयले के सिक्न सक्छन् ?
विद्यालय आफैँमा सिकाइ केन्द्र हो । रेडियन्टमा जाँदा सिक्नका लागि धेरै विषय छन् । अलग ढंगको शैक्षिक गतिविधि, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको रेकर्ड किपिङ, विद्यार्थीमा नेतृत्व क्षमता, यसैगरी रुटिङ म्यानेमेन्ट अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । विद्यार्थीलाई जीवनकला सिकाइन्छ । विद्यार्थीलाई सानैदेखि एउटा टे«न्डमा लाने प्रयास गरेका छौँ । विद्यार्थीलाई पर्सनल हेल्थ एन्ड हाइजिनमा पूर्ण केन्द्रित, प्रशासनिक रूपमा डकुमेन्टेसन र पारदर्शिताको विषय, शिक्षक तथा कर्मचारीमा सेल्फ लिडरसिप देख्न सकिन्छ । रेडियन्टमा हरेक कक्षाको कक्षाशिक्षक नै त्यो कक्षाको प्रिन्सिपल हो, सबै प्रशासनिक जिम्मा उसैलाई प्रदान गरेका छौँ । सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटी नै यहाँको प्रमुख विषय मान्न सकिन्छ । विद्यालयको सरसफाइ र व्यवस्थापन अत्यन्त राम्रो छ । स्पेस म्यानेजमेन्ट अर्को राम्रो पक्ष हो । हरियाली, सुन्दर बगैँचा र सरसफाइका कारण विद्यालयको वातावरण रमणीय छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा गोली चल्छ, हर्नुस् त अवस्था ! शिक्षाका सरोकारवाला सबै राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्न लागेका छन् । उनीहरूले त शिक्षाका एजेन्डा स्थापित गर्नुपर्ने हो । नेपालको शिक्षामा सुधार गरेर यति धेरै विद्यार्थी ल्याउन सक्छौँ कि, यसबारे कसैले सोचेकै छैन । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको हब बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाएर मासिक ५ सय डलर दिन सकिन्छ । हाम्रा सबै डाँडाकाँडामा विधागत विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ ।
तपाईं प्याब्सनमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, के छ प्याब्सनप्रति सरकारको हेराइ ?
म प्याब्सनमा ०५७ बाट निरन्तर छु । महाधिवेशन प्रतिनिधि, ललितपुर जिल्ला सहसचिव, सचिव, केन्द्रीय सचिव, दुईपटक महासचिव हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा कार्य गरिसकेको छु । म प्याब्सनलाई ०५२ देखि नै नजिकबाट चिन्दछु । वास्तवमा प्याब्सन प्रतिपक्ष होइन, सहयोगी हो । राज्यले प्राइभेट सेक्टरलाई डिफाइन गर्दा कन्जुस्याइँ ग¥यो । यो त सपोर्टर हो, हेल्पर हो । हामीलाई राज्यले सौताका रूपमा हेरेको छ । हाम्रो भाग खान आए, रोजी–रोटी खोस्न आए भन्ने भ्रम छ । प्रत्यक्ष रूपमा २ सय अर्बको लगानी संस्थागत क्षेत्रको छ, जसले ३ लाख रोजगारी प्रदान गरेको छ । हाम्रो सेक्टरसँग जोडिएको स्टेसनरी, पब्लिसर, झोला, खाजा–खाना आदि उत्पादकले ३ सय अर्ब लगानी गरेका छन् । हामी गुणस्तरीयतामा विश्वास राख्छौँ । त्यसैले राज्यले हाम्रो राम्रो पक्ष बुझेर अवलम्बन त गर्नुप¥यो नि ! हाम्रो लगानी संरक्षणका लागि हामी बाध्यात्मक रूपमा बोल्नैपर्छ । त्यसैले प्रतिपक्षजस्तो देखिएको हो ।
तपाईं नीति–निर्माता भएको भए निजी शिक्षालाई कस्तो स्थान दिनुहुन्थ्यो ?
सीधा भन्नुपर्दा निजी शिक्षालाई म स्वायत्तता दिन्थेँ । केही इन्डिकेटर राख्ने र नियमन गर्ने गरी स्वायत्तता दिनैपर्छ । शुल्क र सञ्चालन विधि पब्लिक मार्केटसँग जोडिएको विषय हो । मार्केटले यसैलाई निर्धारण गर्छ । निजी शिक्षामा लगानी आफैँमा सामाजिक व्यवसाय हो । यसबापत सामाजिक सेक्टरलाई सुधार गराउँथेँ । यदि जिम्मेवारी पाएँ भने ५ वर्षभित्र चाहे पब्लिक होस् वा प्राइभेट, पूर्ण रूपमा परिर्र्वतन गर्थें । विद्यालय शिक्षामा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक, कसैलाई पनि प्रत्यक्ष राजनीति गर्न दिँदैनथेँ । विद्यालय सञ्चालक पनि प्रत्यक्ष राजनीतिमा देखिनु राम्रो होइन ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा गोली चल्छ, हर्नुस् त अवस्था ! शिक्षाका सरोकारवाला सबै राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्न लागेका छन् । उनीहरूले त शिक्षाका एजेन्डा स्थापित गर्नुपर्ने हो । नेपालको शिक्षामा सुधार गरेर यति धेरै विद्यार्थी ल्याउन सक्छौँ कि, यसबारे कसैले सोचेकै छैन । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको हब बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाएर मासिक ५ सय डलर दिन सकिन्छ । हाम्रा सबै डाँडाकाँडामा विधागत विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ । पर्वतीय अध्ययन, हाइड्रो, जर्नल, कृषि, जडीबुटी आदि विश्वविद्यालय बन्न सक्छन् । छिमेकी मुलुक भारतले सिक्किम, नैनीतालजस्ता क्षेत्रमा शिक्षाको हब बनाउन सकेको छ । अस्ट्रेलियामा विदेशी विद्यार्थीले तिरेको रकमले अर्थतन्त्रमा राम्रो हिस्सा ओगटेको छ । हामी पनि एसिया, युरोय, अमेरिकाका मान्छे पढाएर पैसा कमाउन सक्छौँ । यो सोच्ने कहिले ? अब सोच्ने वेला आएको छ । तर, फराकिलो ढंगले सोच्नुपर्छ । म कानुन बनाउने ठाउँमा भएको भए यी सबै कुरा सोच्ने थिएँ ।
अबका १० वर्षमा निजी माध्यमिक शिक्षाको अवस्था कस्तो होला ?
स्थानीय सरकारको नीतिले यसको भविष्य र सञ्चालन पद्धतिलाई निर्धारण गर्छ । नेपालमा जन्मदर घट्दो छ, तर शैक्षिक संस्था बढ्दो । स्थानीय तह सानो युनिटको सरकार भएकाले पक्कै माध्यमिक शिक्षाको आकार घट्न सक्छ । त्यसैले विद्यालय मर्जरको अवस्था आउन सक्छ । अझ युरोपेली र अमेरिकी स्थानीय सरकारलाई हेर्ने हो भने एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा पढ्न जाँदा ट्याक्स तिर्नुपर्छ । जस्तै, ललितपुर महानगरको विद्यार्थी यहीँ पढ्नुपर्ने व्यवस्था हुन सक्छ । यदि त्यहाँबाट काठमाडौं महानगरभित्रका शैक्षिक संस्थामा पढ्न जान्छन् भने थप ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अब स्कुल जोन बन्नुपर्छ । कर्मशील व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आए भने यो ग्लोबलाइज्ड हुन्छ । शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नेबित्तिकै त्यसलाई खुला गर्नैपर्छ । यही नै ग्लोबलाइजेसन हो । अहिले एकले उत्पादन गर्ने अर्कोले प्रयोग गर्ने हो । सबैले उत्पादन पनि र प्रयोग पनि गर्ने हुँदैन । ग्लोबल कन्टेस्टबाट सेटल हुनुपर्छ ।